Phezulu 5 Best Uhambo Usuku Ukusuka Brussels | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba eYurophu > Phezulu 5 Best Uhambo Usuku Ukusuka Brussels
Phezulu 5 Best Uhambo Usuku Ukusuka Brussels
Uloliwe wokuhamba eBelgium, Uloliwe Travel Holland, Uloliwe Ukuhamba ngeLuxembourg, Uhambo lukaloliwe lwaseNetherlands, Ukuhamba eYurophu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 07/08/2021)
Uye ababeyiqwebile kwebala kunye nembali, ubugcisa, kunye nesiko Brussels kwaye ukulungele ukuhlola ngaphandle kwemida yesixeko ngoku. Ngethamsanqa, kukho kwakhona eninzi ukuba ukuhlola kwisithuba uhambo losuku evela Brussels. Kanga-, ukuba siye sagqiba ekubeni abeke uluhlu lwe 5 Best imini sisuka Brussels nje wena!
EGhent ivuliwe zethu 5 Uhambo oluhle losuku oluvela kuluhlu lweBrussels kuba luyaziwa ngokuba yenye yezobutyebi bexesha eliphakathi laseBelgium kunye nexabiso lenkcubeko, angala; umculo, iholo yeqonga, ifilimu, yaye ezibonwayo. Kwakhona super esondele Brussels, akhiwe kuphela 60 Iikhilomitha ukusuka eBrussels, kwaye inokufikeleleka ngokulula ngololiwe.
Enye yezona zinto zibalaseleyo zokwenza kwesi sixeko sinomtsalane mandulo kukuyihlola ngeenyawo, ukubamba umbono wayo izakhiwo Amazing ephakathi, kwakunye ukuba uzive emoyeni wayo oludlamkileyo.
Dumisani Yokunqulwa i eyimfihlakalo iMvana yi abazalwana Van Eyck ibekwe ngaphakathi Saint Bavo Cathedral. Ndwendwela i Belfry eGhent, Hall Town, kwaye usondele kwimbali yokurhweba yesixeko e Fish Market Old.
3. Best Uhambo Usuku Ukusuka Brussels: eAmsterdam
Amsterdam kudla saziwa ngokuba umdla iikhefi! (Ukuba uyayazi ndithetha ukuthini!) kodwa, musa ukuvumela ukuba ubezé. Amsterdam yenye best 5 Best imini sisuka Brussels kuba kwakhona indawo wembali, isiko, kanye art.
Fumana kuzakudibanisa nge elidlulileyo Anne Frank House, ukufunda art kwi Rijksmuseum, UVan Gogh, kunye neemyuziyam zeRembrandt House, kwaye wonwabele odumileyo uHeineken Experience. abahambi enesibindi unako ukuqesha isithuthuthu ukuhlola nasezitratweni, yezinto imbali, kunye pubs eziphambili Amsterdam. Ngeli xesha, romantics babe namava Amsterdam ekhethekileyo ngexesha lokuphila kuthoba ride umkhumbi.
Kuthatha kuphela 2.5 iiyure ukusuka Brussels ukuba khona. Xa kwakho itshakace off uloliwe, intloko kwikomkhulu leGrand Duchy kwaye uqalise ukhenketho lwakho ngokujonga ikota yaseKirchberg kunye nezakhiwo zayo ezininzi ezibalulekileyo njengeNkundla yezoBulungisa yaseYurophu., kunye neKomishoni European. Ukumangaliswa i Notre Dame Cathedral, indawo ephawuleka ngokudibanisa ngokugqibeleleyo ubugcisa besiGothic emva kwexesha kunye nokuhonjiswa kweRenaissance. Qhubeka ezula ejikeleza izitrato ebukekayo. Ungaphoswa ubambisa ukubona yebhotwe elalibizwa ngokuba Grand lweTshawe iinqaba isixeko.
Njengabo izixeko ezininzi Belgian, i isikwere sentengiso iqulethe uluhlu olunomtsalane loyilo. Oku kwakhona ngoba isininzi uhlala izakhiwo medieval ziye zabuyiselwa. On kunothi ngakumbi, ukuba ngaba foodie, ke uya kunandipha Cuisine yemveli Flemish kwaye ke, ibhiya.
Ukulungele ukuhlola ngaphaya Brussels? Ewe? Gcina A Isitimela Ungafumana apho, kungekho ntlawulo akhabayo kunye nenkqubo nokubhukisha ogudileyo kunye ne-eriyeli. Kulula!
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “5 Usuku Easy sisuka Milan By Train” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://www://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-from-brussels%2F%3Flang%3Dxh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
bruges	EBrussels	Imini yohambo	eGhent	Laksembheg	tips zokuhamba train	Ukuhamba	iingcebiso zokuhamba
Ukuqeqesha ngezimali, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe eSweden, Ukuhamba eYurophu
Uhambo loLoliwe, Uloliwe wokuhamba eBelgium, Iingcebiso zokuhamba, Ukuhamba eYurophu